I-Detroit Determinism ichazwe
Ukuzama ukudibanisa ukuthanda kunye nokuzikhethela
I-determinism ye-Soft yombono wokuthi i-determinism kunye nentando yamahhala iyahambelana. Ngaloo ndlela uhlobo lokubambisana. Eli gama laqulunqwa ngumfilosofi waseMerika uWilliam James (1842-1910) kwisicatshulwa sakhe esithi "I-Dilema De Determinism."
I-determinism ye-Soft iqulethe amabini amabango angundoqo:
1. I-Determinism yinyaniso. Zonke iziganeko, kubandakanywa nantoni na isenzo sabantu, sinqunywe ngokucacileyo. Ukuba ukhethe i-vanilla kunokuba ukhathele i-chocolate ye-ayisikriki ebusuku, awukwazanga ukhetho ngenye indlela unikezele imeko kunye nemeko yakho.
Omnye onolwazi olwaneleyo malunga neemeko zakho kunye nemeko uya kukwazi, ngokusemgangathweni, ukuchaza oko uza kukhetha.
2. Senza ngokukhululekile xa singanyanzelekanga okanye sinyanzeliswe. Ukuba imilenze yambophekile, andikhululekile ukuqhuba. Ukuba ndiyifake isikhwama sam umphangi obeka umpu emlonyeni wam, andisenzi ngokukhululeka. Enye indlela yokubeka oku kukuthi senza ngokukhululekile xa senza kwiiminqweno yethu.
I-determinism ye-Soft iyahlukelelanisa kunye nokuzimisela okunzima kunye nento ekuthiwa ngezinye ii-libertarianism. I-determinism enzima ithi i-determinism iyinyaniso kwaye iphika ukuba sinakho ukuzikhethela. I-libertarianism ye-Metaphysical (ukungadityaniswa nemfundiso yezobupolisi) ithi i-determinism iyinyani ukususela xa senza ngokukhululekile inxalenye yenkqubo ekhokelela kwisenzo (umz. Umnqweno wethu, isigqibo sethu, okanye isenzo sethu sokuthanda) asikho esetyenziswe ngaphambili.
Ubunzima be-determinists obujongene neengxaki zijongene noko kuchaza indlela izenzo zethu ezinokubanjelwa kwangaphambili kodwa zikhululekile.
Ininzi yabo yenza oku ngokugxininisa ukuba inkolelo yenkululeko, okanye inkululeko yokuzikhethela, iyaqondwa ngendlela ethile. Bayayinqanda into yokuba inkululeko yokuzikhethela imele ifake phakathi kwamandla okungaqhelekanga okuxhomekeke kuwo wonke umntu-oko kukuthi, ukukwazi ukuqala isiganeko (umz. Isenzo sethu sokuthanda, okanye isenzo sethu) esingekho ngokwayo.
Ingcamango ye-libertarian yenkululeko ayiqondakaliyo, bayaphikisana, kwaye iphikisana nomfanekiso wesayensi. Eyona nto ibalulekileyo kuthi, baxubusha, kukuba sinokufumana ubuninzi bokulawula kunye noxanduva lwezenzo zethu. Yaye le mfuneko ifumaneka ukuba zethu iintshukumo zihamba ukusuka (zimiselwe) izigqibo zethu, iingcinga, iiminqweno kunye nomlinganiso.
Isichaso esona sikhokelo esincinci
Inkcaso eqhelekileyo kwi-determinism esithambileyo kukuba inkolelo yenkululeko inamathela kwizinto ezininzi abantu bathetha ngokuzikhethela. Mhlawumbi ndixhomekeka, kwaye nangona unesifo se-hypnosis Ndiyatshala iminqweno ethile engqondweni yakho: umz. Umnqweno wokufumana isiselo xa iwashi lixabana neshumi. Ngomlingo weshumi, uvuka uphinde uthele amanzi. Ngaba wenze ngokukhululekile? Ukuba ukwenza ngokukhululekileyo kuthetha nje ukwenza oko ufunayo, usebenze kwiminqweno yakho, ngoko impendulo nguwe ewe, wenza ngokukhululeka. Kodwa uninzi lwabantu luya kubona isenzo sakho singenasiphelo ukususela ekubeni, ngokuqinisekileyo, ulawulwa ngumnye umntu.
Omnye unokuyenza umzekelo ngokugqithiseleyo ngokucinga ngososayensi okhupha ukufaka i-electrodes kwingqondo yakho kwaye emva koko uvuselele kuwe zonke iintlobo zeenqweno nezigqibo ezikukhokelela ukwenza izinto ezithile.
Kule meko, uya kuba yinto encinane kunepopu ezandleni zabanye; kodwa ngokubhekiselele kwiinkcazo ezithambileyo zenkululeko, uza kuba ukhululekile.
I-determinist epholileyo ingaphendula ukuba kwimeko enjalo sinokuthi awukho mthethweni kuba ulawulwa ngumnye umntu. Kodwa ukuba iminqweno, izigqibo, kunye nezifiso (izenzo zentando) ezilawula izenzo zakho ngokwenene, ngoko kuqiqa ukuthetha ukuba ulawula, kwaye ngoko usebenza ngokukhululekile. Umgxeki uya kuthi, ngokubhekiselele kwi-determinist esithambileyo, iiminqweno zakho, izigqibo kunye neziphakamiso-eqinisweni, umlingani wakho-ekugqibeleni unqunywe ngamanye amanqanaba angaphandle kokulawula kwakho: umz. , kunye nommandla wakho. I-upshot isengokuthi, ekugqibeleni, unokulawula okanye uxanduva lwakho kwizenzo zakho.
Lo mgca wokugxekwa kwe-determinism elithambileyo kuthiwa ngamanye amaxesha uthi "ingxabano."
I-determinism ephantsi namhlanje
Uninzi lweengcali zefilosofi eziquka uThomas Hobbes, uDavid Hume, noVoltaire baye balwela uhlobo oluthile lwe-determinism elincinci, Olunye uhlobo lwalo lubonakala luyinkalo ekhethekileyo yokuzikhethela inkululeko phakathi kwabafilosofi beengcali. I-determinists ehamba phambili namhlanje iquka iPol Strawson, uDaniel Dennett kunye noHarry Frankfurt. Nangona izikhundla zazo ziwela ngaphakathi kwemida ebanzi ichazwe ngasentla, zinikela ngeenguqulelo ezintsha kunye nezikhuselo. U-Dennett, umzekelo, kwincwadi yakhe ethi Elbow Room , uthi into esiyibiza ngokuba yinto enokuzikhethela yinto ephuhlisiwe kakhulu, esiye sazicwangcisa kwiimeko zokuziphendukela kwemvelo, ukuba sicinge ngeemeko ezizayo kwaye sigweme abo singathandi. Le ngongoma yenkululeko (ukukwazi ukunqanda ikusasa elingathandekiyo) iyahambelana nokuzimisela, kwaye konke okufunekayo. Iingcamango zemveli zengqondo yokuzikhethela ezingenakuhambelana nokuzimisela, akuthi, akufanelekile ukugcina.
Indeterminism kunye nentando yokuzikhethela
I-Beautiful, i-Sublime, ne-Picturesque
Iingcebiso ezili-10 zokuqonda iZibhalo ze-Philosophical
Uthi I-Nietzsche Kuthetha Ngani Xa Ethi UThixo Ufile?
René Descartes '' Ubungqina Bokuba Kukho KuThixo '
I-Stoics ne-Moral Philosophy - I-8 Imigaqo yeStoicism
Indlela yokufunda kwi-Philosophy Exam
Indlela yokufunda ingxelo yeCarFax
Izinto Ezingabalulekanga Abafundisi Abakhulu Bakwenzayo
Iimfazwe zeMfazwe eziPhambili kunye eziPhambili kunabo bonke
Ukufa kwe-Triumvirate yokuqala
I-Madonna ye-38 I-Top 10 Pop Iingoma
I-Electron Spin Inkcazo kwiKhemistry
I-Khalsa I-Arabhu iLizwi le-Arabhu
I-Best Spooky, i-Silly, i-Creepy, ne-Rockin Iingoma ze-Halloween zezingane
Indlela yokutshintshwa kweeTranskiti zee Skateboard
Iimpawu eziqhelekileyo zesiTaliyane
URobert K. Merton
I-Kia Motors Izisa i-Mojave, i-Mid-size Concept Pickup Truck
Iimpazamo ezili-10 eziqhelekileyo zokufundisa ukufundisa abaTitshala
Ngaphambi kokuba Ukhumbule iKhaya lakho
Bucknell University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukufunda okumiselweyo: IWarren Ellis & Mike Deodato Jr Iindudumo
Iimpawu ezifunekayo kunye neenzuzo ze-PFD ezithintekayo